बुझ्नै पर्ने उद्योगका भित्रि तिन कुरा, च’र्को विद्युत महशुलले डा’मेपछि घाटाको व्यापार : नवल किशोर शाह (भिडियो सहित)::नेपाली मनको डिजिटल पत्रिका
उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लिमिटेडका निमित महाप्रवन्धक नवल किशोर शाहले विद्युतमा अत्याधिक भार खेप्नु परेकोले उद्योगलाई सोचे अनुरुप अगाडी वढाउन नसकिएको वताएका छन । मुलुक लोडसेडिङ मुक्त भईसक्दापनि डेडिकेटेड फिडरको ट्याक नहटेकाले मासिक डेढ करोड भन्दा वढिको आर्थिक भार खेप्नु परेको शाहको भनाई छ ।
डेडिकेटेड फिडरको ट्याग हटाउन उद्योग मन्त्रालय र प्राधिकरणलाई पटक पटक जानकारी गराउदा समेत सुनुवाई नभएको उनको भनाई छ । उदयपुर सिमेन्ट उद्योगले गैँडा छाप सिमेन्ट उत्पादन गर्दै आएको छ । निमित महाप्रवन्धक शाह संग समग्र रुपमा उद्योगको अवस्थाको बारेमा स्वदेश नेपालका भुपेन्द्र पौडेलले गरेको कुराकानि–
के छ उदयपुर सिमेन्ट उद्योगको अवस्था ?
समग्रमा भन्नुपर्दा उत्पादनको हिसावले अहिले राम्रै छ । केहि वर्ष अगाडी दैनिक अढाई तिन सय टन उत्पादन हुन्थ्यो तर आजको दिनमा हामिले साढे सात सय देखि आठ सय टन उत्पादन गरिरहेका छौ ।
जुनकी उद्योगको क्षमतानै आठसय टन छ । जसले गर्दा उत्पादनको हिसावले भन्ने हो भने सन्तोषजनक छ । किनभने आज भन्दा ३० वर्ष अगाडी स्थापना भएको उद्योग अहिले आयर शुरुका दिनमाझै आठसय टन दैनिक उत्पादन दिदै छ त्यसमा हामिले पु¥याउन सकेकोमा हामि खुसि छौ ।
उत्पादन अनुशारको बजार सन्तुलन कायम गर्न सक्नु भएको छ ?
बजारको हकमा निजि क्षेत्रका मिसेन्ट उद्योग संग हामिले प्रतिस्पर्धा गर्न सकेका छैनौ किन भने उनिहरुको तुलनामा हाम्रो उत्पादन मुल्य वढि छ जसका कारण बजारमा हाम्रो उपस्थिति क्वालिटि राम्रो हुदा हुदैपनि जुन अनुरुपको गति लिनुपर्ने हो मुल्यको कारणले त्यो गति लिन सकेका छैनौ । अहिलेको बजार अनुशार मुल्यनै सबै भन्दा ठुलो फ्याक्टर देखियो क्वालिटिको विषयमा ग्राहक वर्ग जागरुप नभएको जस्तो हामिले पाएका छौ ।
निजि उद्योग संग उदयपुर सिमेन्ट उद्योगले प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको हो ?
नसकेको कुरा स्विकारर्नु पर्छ तर त्यसका कारण पनि बुझ्न जरुरी छ । दुईका कारण छन् एउटा त के हो भने हाम्रो फ्याक्ट्री आज भन्दा ३० वर्ष पुरानो हो जुन अहिले पनि पुरानो प्रविधिमा संचालित छ अझैपनि त्यसलाई हामिले टाइम टाइममा अपग्रेड गर्नुपर्ने हो त्यो गर्न नसकेको कारणले पुरानै प्रविधिमा संचालन गरीरहेकोले त्यसमा जनशक्ति सरकारी मापदण्ड अनुशार चल्नुपर्ने जसका कारण निजि उद्योग भन्दा धेरै कर्मचारी वढि छन् ।
जसका कारण कर्मचारीको तवल , विद्युत महशुल सरकारले २०७१।७२ मा डेडीकेटेड फिडर जुन दियो त्यसको लागत प्राईभेट भन्दा प्रति युनिट दोब्वर भन्दा वढि छ त्यो मुल्य नै तिरीरहेको कारणले उद्योगको उत्पादन मुल्यनै वढि आउछ त्यसले गर्दा निजि उद्योग संग प्रतिस्पर्धा गर्न सकिरहेको छैनौ ।
विद्युत मुल्य समायोजन गर्न मिल्दैन के छ सम्झौता ?
यसको लागि हामिले पटक–पटक विद्युत प्राधिकरण र उर्जा मन्त्रालय लाई लेखि सक्यौ जुन २०७५साल बैशाख १ गते देखिनै लोडसेडिङ मुक्त भईसक्यो देश त्यस कारण हाम्रंो पनि डेडिकेटेड फिडर हटाएर साधारण मुल्यमा बिलिङ गरियोस भनेर यस विषयमा हामिले धेरै चोटी पत्राचार गरिसक्दापनि हाल सम्म त्यो सिस्टम हटाउन कुनै ठोस पहल भएको छैन ।
उद्योगले मासिक रुपमा विद्युतमा मात्रै कति खर्च गर्छ ?
अहिलेको अवस्थामा भनौन विगत ३।४ वर्ष देखि प्रति महिना हामिले ३ करोड देखि ३ करोड ४० लाख सम्म तिरिराछौ । जुन आफैमा धेरै ठुलो रकम हो । यो किन यति वढि भयो भन्दाखेरी डेडीकेटेड फिडरको नाममा हामिलाई जुन एउटा ट्याग लागेको छनी त्यसको ट्यारिफ त्यसको दर रेट प्रतियुनिटनै साधारण दर रेट भन्दा ६५ प्रतिशत वढि छ ।
हामि डेडीकेटेड फिडरको नाममा आउने दररेट तिर्छौ त्यसका कारण विद्युत महशुल निजि उद्योगको भन्दा हाम्रो वढि छ । पटक–पटक पत्राचार गर्दापनि त्यसलाई हटाउन सकिएको छैन । डेडिकेटेड फिडर लागु हुनुभन्दा अगाडी डेढ करोड सम्मको विल आउथ्यो । अहिले दोब्बर वढि विद्युतमा मात्र खर्च भईराछ । यो उद्योगका लागि ठुलो आर्थिक भार हो ।
उद्योगलाई नयाँ प्रविधिमा अपग्रेडिङ गर्न किन सकिएन ?
हाम्रो उत्पादन खर्च र आम्दानि जुन छ त्यसको तारतम्य मिलाउदानी अहिले सम्म पैसाको जोहो गर्न सकिरहेको छैनौ वास्तवमा भन्नुपर्दा रकम अभावलेनि अपग्रेडिङ गर्न नसकिएको हो । यसमा सरकारलाई पनि पटक–पटक अनुरोध गर्यौ तर सरकारले पनि खासै चासो नदिएकोले अपग्रेडिङ गर्न नसकिएको हो ।
उद्योगमा करिब छ सय कामदार छन भन्ने छनी उद्योगको उत्पादन अनुशार यति कामदार आवश्यक हो ?
हैन यो एकदमै अत्याधिक हो । आजको दिनमा यो आठसय टन क्षमताको उद्योगलाई वढिमा डेढसय देखि दुईसय सम्म कामदार प्रयाप्त हुन्छ ।
जनताले बुझ्नै पर्ने उद्योगले खेप्दै आएको भार के के छ ?
उद्योगका लागि तिन कुरा आर्थिक भारको रुपमा देखिएको छ । पहिलो विद्युत महशुल महङ्गो दोस्रो आवश्यकता भन्दावढि कर्मचारीको तलब भार र तेस्रो यतिका विद्युत महशुल तिर्दै गर्दापनि नियमित र क्वालिटिको विद्युत आउनुपर्ने हो त्यो आउदैन जसका कारण उद्योगले प्रत्यक्ष रुपमा यि तिन कुराको भार खेप्नुपरेको छ । यि कारणले गर्दापनि निजि उद्योग संग हामिले प्रतिस्पर्धा गर्न सकेको छैनौ ।
हामि विच यो संम्वाद चलिरहदा गैँडा सिमेन्टको आजको द्धार मुल्य कति हो ?
आजको दिनमा हाम्रो गेट प्राईज द्धार मुल्य भनौ ७४१ रुपैया प्रतिबोरा छ । त्यसमा दुरी अनुशारको ठाउँ ठाउँमा ढुवानि खर्च जोडेर विक्रि मुल्य कायम गरिन्छ ।
अब यहि अवस्था कामय रह्यो भने उदयपुर सिमेन्ट उद्योग कति समय चल्ला र भनेर आंकलन गर्दा हुन्छ ?
एकदम हुन्छ किन भने यसमा अब दुई तिन वटा कुरा छ जब सम्म यसलाई क्षमता विस्तार गरिदैन, विद्युतको अत्याधिक महशुल भार कटौति गरिदैन र सवैभन्दा ठुलो कुरा निजि उद्योग सम्म प्रतिस्पर्धा गर्नलाई यसको क्षमता विस्तार गरिदैन यति समयमै गरिएन भने धैरै दिन उद्योग टिकाई राख्न गारो छ ।
सरकारको प्रतिक्रिया के छ उद्योगको विषयमा जानकारीत गराउनु हुन्छ होलानी ?
सरकारको भनाई नया मन्त्री ज्यु आएपछि उहाले यसलाई तिन हजार टनमा लाने भनेर आश्वासन दिनुभएको छ । त्यसको लागि हामिले काम अगाडी वढाउदै छौ । तर त्यो तुरुन्त हुदैन त्यसमा टाईम लाग्छ ।
तिन दशक पुरानो उद्योगलाई एउटा गतिमा डो¥याउन सरकारले चाहेमा सम्भव छनी ?
छ किन सम्भव छ भने हामी संग र मेट्रियलको भण्डार छ । आजको दिनमा पनि सिधाली चुनढुङगाखानी ७ करोड २० लाख टन क्षमता भएको खानी हो त्यो आजको दिन सम्म हामिले ४५ देखि ५० लाख टन सम्म मात्र हामिले खपत गर्न सकेको छौ । यसलाई सरकारले चाहेमा ३ हजार मात्र हैन ५ हजार ७ हजार टन जतिको पनि क्षमता विस्तार गर्न सकिन्छ किन भने लाईम स्टोनको भण्डार हामि संग प्रयाप्त छ ।
उद्योगमा नवल किशोर शाहले पछि जादैगर्दा पनि देखिने गरी गरेको काम केहि छ ?
मईले दुई तिन वटा काम गरेको छु यो भन्दा अगाडी किलको काम जुन मर्मत गर्नुपर्ने थियो त्यो महिले २०७१–७२ सालमा गरे त्यो उद्योगको लागि समस्या थियो र खानीको जुन बृहत विकास भयो त्यो महिले खानीमा हुदानी आफ्नै पालमा गरे । त्यस कारण मेरो विचारमा म गएपनी खानीको विषयले म गएपनी मलाई सम्झिने बाटो वनाएको छु भन्ने लाग्छ ।
सप्लायर्सले समयमा भुक्तानी पाएनौ भनेर गुनासो गर्छननी ?
हो कर्मचारीको तलव समयमा खुवाएको छौ तर व्यपारीको भुक्तानी समयमा उपलव्ध गराउन सकेको छैनौ त्यो सत्य कुरा हो । सिमेन्ट उत्पादन भएवपनि मुल्यको कारणले गर्दा बजारमा हाम्रो माग जस्तो हुनुपर्ने हो त्यस्तो सोचे अनुरुप छैन । हाम्रो विक्रि कम भएको छ त्यसले गर्दा समयमा पैसा जोहो गर्न सकेको छैनौ त्यसकारण पनि व्यापारीको भुक्तानीमा केहि ढिलाई भएको हो ।
भगवान बने घरबेटी,को,रोनाको दु,खाइमा तीन महिनाको डेराभाडा नलिने माहान घरबेटी(भिडियो हेर्नुहोस)